Mayelana nathi - Dextube
Insimbi Seamless tubing Straight
BA Insimbi amashubhu Seamless
Womoya eyisilinda tubing
Heat umzimba Tubes
Insimbi Seamless ezigoqile tubing
Iphele tubing izingxenye
Ukuhlolwa & Ukuhlolwa
Dextube kuyinto nomkhiqizi professional izinga okusezingeni eliphezulu ngokunemba insimbi engagqwali amashubhu lapho lihlanganiswa khona, China.
Imikhiqizo yethu eyinhloko ukugxila ngokunemba engagqwali tube nekhono, ikakhulukazi BA amashubhu, UHP Tubes, amashubhu umfutholuketshezi, Instrumentation amashubhu, amashubhu capillary, kanye tubing ezigoqile.
Sihlose ahlinzeke amaklayenti bethu imikhiqizo ephezulu abafanelekayo futhi engabizi ngokuhambisana namazinga omhlaba noma imfuneko ngezifiso. Nge umqondo inkonzo 'ngobuqotho, umsebenzi kanye nekghono', sinikeza oversea kanye namakhasimende basezindlini ngokunakekelwa ephelele service value-added.
Nge okuthembekile emva yokuthengisa service, imikhiqizo yethu akhishwe ukuze eJalimane, eFrance, e-Canada USA, Brazil, Malaysia futhi Singapore njll nge Inethiwekhi ebanzi yophathina amaklayenti. Imikhiqizo yethu umzuzile idumela eliphezulu phakathi amakhasimende ethu.
Dextube Ezithembekile Yakho-Partner ku hle Engagqwali Seamless Tubes Isixazululo.
Amadivayisi: 16 / F, Taihushijia Isakhiwo, No.1198, Defu Road, Shanghai, 201821, China
Ucingo: +86 21 31266796
Sicela ushiye ikheli lakho kithi thina sizothintana emahoreni angu-24.